မြဝတီမြို့၌ တောင်းခံသည့် ငွေမပေးပါက မိုင်းဗုံးများ ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟု စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိ? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ စာတစ်စောင်ပေးပို့ပြီး တောင်းခံထားသည့် ငွေမပေးပါက ဆိုင်အတွင်း ထောင်ထားသော မိုင်းဗုံးများ ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟု ဆိုခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါစတိုးဆိုင်သို့ သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မြဝတီမြို့အမှတ် (၃)ရပ် ကွက် ကြံခင်းလမ်းရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ညနေ ၆ နာရီက ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်းထားသော အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ငွေကျပ် ၁၂ သိန်း မပေးပါက ဆိုင်အတွင်းထောင်ထားသော မိုင်းဗုံးများကို ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် ရေးသားထားသည့် စာတစ်စောင်အား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက် ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”စာထဲမှာရေးထားတာက စတိုးဆိုင် အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ်မှာ မိုင်းဗုံး သုံး လုံးထောင်ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ အခုပေးတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ၁ဝ မိနစ်အတွင်း စာထဲမှာပါ တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို wavemoney နဲ့ ငါးမိနစ် ၁ဝ မိနစ်ခြားပြီး ငွေကျပ် ၁၂ သိန်းလွှဲပေး ရမယ်။ တကယ်လို့ လွှဲမပေးဘူးဆိုရင် စတိုး ဆိုင်အတွင်းမှာ အသင့်ထောင်ထားပြီးဖြစ် တဲ့ မိုင်းဗုံးတွေ ဖောက်ခွဲပစ်မယ်လို့ ရေး ထားတယ်။ ဒါနဲ့ ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြား လိုက်ပါတယ်”ဟု စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးက ပြောသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် မြဝတီခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲ မှူးကြီး အောင်နိုင်ထွန်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်မြေခံတပ်မှ ဗိုလ်ကြီးအောင်ကိုကို ဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်မြေခံ စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ မိုင်းရှာသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရာ အိမ်မှူးများမှ စတိုးဆိုင်အတွင်း မိုင်းရှာဖွေ ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ထူးခြားမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်စဉ်သိသိချင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများနဲ့ မိုင်းရှင်းလင်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေပါဝင်ပြီး ချက်ချင်း လာရောက်ရှာဖွေ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ မြဝတီ မြို့ ထဲမှာ အခုလို ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်မှု ဖြစ် စဉ်တွေ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အ သက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်လုံခြုံရေးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အထိခိုက် မခံနိုင်ပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် အခုကိစ္စကို ကျွန်တော့်ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖော်ထုတ် အရေးယူသွားမှာပါ”ဟု မြဝတီခရိုင်ရဲတပ် ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီး အောင်နိုင်ထွန်းက ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ ခြိမ်းခြောက်စာပေးပို့ခံရမှု နှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါစတိုးဆိုင်၌ တပ်ဆင်ထားသော CCTV မှတ်တမ်းကို ရှာ ဖွေရာ ခြိမ်းခြောက်စာ လာရောက်ပေးပို့သူမှာ မြဝတီမြို့အတွင်း ကျောနံပါတ်(…) ဝတ်ဆင်၍ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ မောင်းနှင်သူ နိုင်မင်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ၎င်းအား စစ်ဆေးရာ ညနေ ၅ နာရီခွဲက မြဝတီမြို့ ရွှေမြင်းဝန်ဘုရားကြီးအနီး လေပြည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီးမှ အမည်မသိ လူတစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်တက္ကစီခ ကျပ် ၅ဝဝ ပေး ၍ ပိတ်ထားသော စာအိတ်တစ်အိတ်ကို အဆိုပါစတိုးဆိုင်သို့ ပေးခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည့်အတွက် ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးပို့ခိုင်းသူအား သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းဖော် ထုတ်နေကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ရခိုင်အရေးဆွေးနွေး၊ ?
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ထော်လာဂျီ တိမ်းမှောက် အနည်းဆုံး ကိုးဦး သေဆုံး
ဗီအဲရာနှင့် ပြန်ဆုံခြင်းထက် ပိုအရေးပါသောပွဲဟု အွန်နရီ ဆို